Nhau - Dhizaina nyowani dhizaini
Aina Lighting inogadzira mwenje mutsva unonzi Bright-Mate
Kupenya -Mate: Inotakurika mwenje yekutamba uye shanda kwese kwese
Ichi chigadzirwa chinosanganisa 30W yakakwira-simba mwenje mwenje dze LED, mabhatiri akakwirira-emagetsi, uye zvivakwa zvinotsigira mune yakatambanudzwa mativi emitatu prism nenzvimbo yakareba ye98mm. Zviri nyore chaizvo kutakura nekuchengetedza. , Emergency standby uye dzimwe nguva.
Ichi chigadzirwa chine akawanda matsva dhizaini, yakashongedzwa nemhando dzakasiyana dzekure kure kudzora mabasa, anotevera mashandiro anogona kuitwa nerekure kutonga mukati meanosvika 100m: iyo yepamusoro mwenje-inoburitsa chikamu inotenderera mazana matatu emadhigirii kuona shanduko inoshanduka yechiedza- kuburitsa nzvimbo; iyo sosi yechiedza yakagadzirirwa ine shutter mhando inoratidzira, kuburikidza nekugadzirisa iyo kona yemapofu kuti iwane kugadziridzwa kweiyo yekuvhenekera kona yemwenje, ichipa mwenje wakasununguka kwazvo pasi pemamiriro akasiyana ekushandisa.
Iyo yakasarudzika kamwe-kiyi bhureki kuvhura dhizaini kunokanganisa iyo yechinyakare fomu yekutsigira, ichiita kuti chigadzirwa chive nyore uye chakanakisa kugadzirisa.
Chiedza chechigadzirwa ichi chinogona kugadziridzwa kuti chivheneke uye tembiricha tembiricha, iyo yepamusoro mwenje kuburitsa inogona kusvika ku4500lm, iyo kupenya kusiyanisa renji iri 10-100%, uye iyo tembiricha tembiricha misiyano renji ndeye 3000K ~ 5000K.
Ichi chigadzirwa chakashongedzwa ine simba lithiamu-ion bhatiri iyo inogona kupa inopfuurira mwenje kwemaawa gumi pasimba rakazara. Rambi rakagadzirwa ne USB interface, iyo inogona kupa rubatsiro rwekuchaja nharembozha yako uye nezvimwe zvigadzirwa zvinotakurika.
Ichi chigadzirwa chinosungirirwa nemhando dzakasiyana dzechaji, uye kune nzira dzakawanda dzekuwedzera kugona kwayo. Inogona kubhadhariswa kuburikidza nesimba rekutengesa, magetsi ezuva, uye mota.
Iyo yose chigadzirwa ingori 4kg chete, uye dhizaini yemaoko tambo pane chigadzirwa iri nyore kushandura chinzvimbo chero nguva.
Ichi chigadzirwa chicha buda mukati memwedzi miviri. Kugamuchirwa kuti uone mwenje wedu mutsva